PressReader - Northern Eyethu: 2018-06-26 - Siya­jab­u­lisa isiphetho seyam­ab­hasi iPhathane
Siya­jab­u­lisa isiphetho seyam­ab­hasi iPhathane
Northern Eyethu - 2018-06-26 - NEWS -
kwezidubedube ebezikhona phakathi kwabag­i­beli bam­ab­hasi nenkam­pani iPhathane Trans­port, kodwa kuya­jab­u­lisa ukubona in­dlela oluphethe ngayo lolud­aba.
Umphakathi waKwe­sak­waM­thethwa nongabag­i­beli bam­ab­hasi iPhathane Trans­port, ngesonto eled­lule ubonakale ub­hik­ishela yona lenkam­pani yam­ab­hasi, ukhala ngezinga eliphansi lokusebenza kwayo.
Lom­phakathi ubuham­bise uhlu lwezikha­lazo emah­ho­visi alenkam­pani kanye nasemah­ho­visi oMnyango We­zokuthutha aseM­pan­geni.
Obekuse­qhul­wini lwezikha­lazo, wud­aba lok­ufa kwam­ab­hasi, noku­holela ekutheni abag­i­beli ban­gak­wazi ukufinyelela ezin­daweni aba­suke beya kuzo njen­gasemiseben­zini nasezikoleni.Kule­mashi ebishu­bile, abag­i­beli baphinde bakhala kakhulu futhi ngok­wehluleka kwenkam­pani iPhathane Trans­port, uk­wenza um­sebenzi wayo.
Baze benza iz­in­como zokuba lenkam­pani iwushiye phansi lom­sebenzi, bese kuqhubeka inkam­pani Ikhwezi Bus Ser­vice, okuyiy­ona abayethem­bayo ukuthi in­gawenza kang­cono lom­sebenzi.
Babuye bay­isola futhi ngokuthi ayise­nazo iz­imali, yin­gakho ih­luleka uku­lungisa lam­ab­hasi ayo ahlala efa njalo.
Nokho in­dlela eziphen­d­ule ngayo izikhulu zePhathane Trans­port kulezi zikha­lazo iya­jab­u­lisa im­pela.
Lenkam­pani ivele ya­thenga am­ab­hasi ama- sha ay­ishumi ne­sikhom­bisa, azosebenza uk­welekelela ukuthutha umphakathi. Ngokuc­haza kweMe­nenja yalenkam­pani, uMnuz. Man­qoba Mdlet­she, lam­ab­hasi athengwe ngenxa yokuh­langabeza izikhalo zabag­i­beli, futhi lenkam­pani yakhe iz­i­bophezele ek­wan­dis­eni isi­balo sam­ab­hasi amasha.
Ngokuc­haza kukaMdlet­she, inkam­pani yakhe ih­lele ukuthi kuthi kuphela in­yanga ka-July babe se­be­fake am­ab­hasi amasha wodwa emzileni wabo abawuseben­zayo ukuthutha umphakathi.
Sihle sona isiphetho sa­lolud­aba oluqale kabi, kodwa kuyahlupha ukuthi iz­into njalo zilungiswe nge­muva kom­don­siswano nabaphathi.
End to bus strike com­mended